ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကျန်းမာရေး
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, February 13, 2010
ညရဲ့ကောင်းကင် February 13, 2010 at 6:14 PM
အချစ်က လူကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစေတယ်နော်... အဟီး ...
kokomaung.uk February 13, 2010 at 8:41 PM
အချစ်ရဲ့အကျိုးတွေ အခုမှသိရတော့တယ်။
ဒါနဲ့... ပန်းကဗျာတစ်ယောက်လဲ ကျန်းမာနေတယ်ဟုတ်းဝ)
ပန်းကဗျာရေ.. ဧရာဝတီကို မဲပေးထားတာ ကြာရောပေါ့။ နောက်မကျပါဘူး။
Ðaywalker( စိုးလှိုက်ဦး ) February 14, 2010 at 5:58 PM
* အချစ်က နုပျိုစေနိုင်တယ်
* အချစ်က အသက်ရှည်စေနိုင်တယ်
* အချစ်က ကိုယ်ခံအားကောင်းစေနိုင်တယ်
* အချစ်က သွေးတိုးကာကွယ်ပေးတယ်
* အချစ်က နှလုံးအတွက် ကောင်းစေတယ်
* အချစ်က ကိုလက်စထရောပမာဏ လျှော့ချပေးတယ်
* အချစ်က နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်တယ်.
* အချစ်က ညဏ်ကောင်းစေတယ်
* အချစ်က စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေတယ်
* အချစ်က ကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ကို ရစေနိုင်တယ်တဲ့ . . . .
မြစ်ကျိုးအင်း February 14, 2010 at 6:47 PM
အချစ်ရှိတာ ကောင်းတာပေါ့ စိတ်တခုလုံး နုပျို လန်းဆန်နေစေတယ်လေ။
ိ်ကိုတိုးလေး February 14, 2010 at 7:59 PM
အချစ်ရှိတာကောင်းတာပေါ့လေ အချစ်ရှိတော့ စိတ်တစ်ခုလုံးလန်းဆန်းစေတယ်လေ။ အချစ်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျသလို အချစ်ကြောင့်လည်းအားတက်စေတယ်လေ။ မရှိရင် မဖြစ်တာ အချစ်ပါ။
စည်သူ February 15, 2010 at 6:38 PM
အဟိ.. အဟိ.. အဟိ..
သွေးတွေတိုးနေလို့.. ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မယ်လို့ ကြံလိုက်ရုံပဲ ရှိသေးတယ် pressure က normal ပြန်ဖြစ်သွားတာအမရေ..
ဂျပန်ကောင်လေး February 15, 2010 at 8:10 PM
ဟားဟား... မိုက်တယ်..မိုက်တယ်.. အဲဒီဆေးကိုပဲ မှီဝဲမှ....း))
သဒ္ဓါလှိုင်း February 16, 2010 at 3:45 PM
အဲလို ချစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်ကွယ်..
Welcome February 17, 2010 at 7:14 PM
အိမ်ထောင်မပြုတဲ့ ပျို ၂ ကြီးတွေ ရောဂါထူတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးတယ်။
ဒီအိမ်က မမ တို့လဲ လုပ်လိုက်တော့ ..